Emmanuel Macron oo ka dalbaday Erdogan inay kulmaan - Tilmaan Media
Sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu madaxwaynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa farriin gacmeed uu u soo diray dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku sheegay doonitaankiisa in labada hogaamiye kulan yeeshaan lana xoojiyo xiriirka labada dal.
Wasiirka ayaa sheegay in Erdogan aqbalay soo jeedinta Makron, lana filayo dhawaan kulan Fogaan-Arag ah ay yeeshaan labada madaxwayne.
Erdogan ayaa aad u dhaleeceeyay siyaasadaha madaxwaynaha Faransiiska ee ku aadan muslimiinta laga tirada badan yahay ee kunool dalkiisa. Isagoo sheegay in maaxwaynaha Faransiisku u baahan yahay baaritaan caafimaad oo garaadkiisa lagu sameeyo.
Labada dal oo ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO ayaa waxay isaga soo horjeedaan arrimo dhawr ah, sida dagaalka Liibiya, Ezerbejan iyo Suuriya. Kulankaan ayaa laga yaabaa inuu qaboojiyo khilaafka u dhaxeeya labada dal.